(Dhageyso) Sweden: Hooyo soomaali ah oo ilmihii 8-aad umusha looga qaatay. - NorSom News
(Dhageyso) Sweden: Hooyo soomaali ah oo ilmihii 8-aad umusha looga qaatay.
Sawirka hooyada ilmaha laga qaatay oo baraha bulshada horey ugu soo bandhigtay dhibaatada ay la kulantay. Foto: Youtube
Hooyo Soomaaliyeed oo ku nool dalka Sweden oo horey looga qaatey toddoba caruur ah oo ay dhashay ayaa shaley laga qaatay canugii sideedaad, saacado un kadib markii ay dhashey.
Hooyo Faadumo Buraanburtooy, ayaa gabadha yar markii umushey waxaa kala wareegay mas’uuliyiinta magaalo ay horey u deganeyd oo ay kasoo guurtay.
Idaacada VOA-da ayaa khadka teleefonka ee Sweden kula xariirtey Sheekh Xuseen Faarax Warsame, oo ka mid ah culumada Soomaliada ee Sweden, kaasi goob joog u ahaa sida falka qaadashada ilmahan yar uu u dhacay. Hoos ka dhageyso wareysiga
Previous articleAarhus: 61 oo kamid ah 78 qof oo covid-19 laga helay, waa soomaali!!.
Next articleWasaaradda A. Dibadda oo ku talineyso in dalalkan aan loo safrin.